သင်၏ Webinar အသုံးစရိတ်များကိုအသုံးချခြင်း - Webinar ROI Calculator | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 26, 2014 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 28, 2020 Jenn Lisak Golding
ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ B2B စျေးကွက်သမားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ ၁၃ ခုကိုအသုံးပြုသည် သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်? မင်းအကြောင်းကိုငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုတွေးနေရုံနဲ့ခေါင်းကိုက်စေတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်စဉ်းစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနည်းပရိယာယ်များစွာကိုအသုံးပြုရန်ကူညီပေးသည်။ နတ်ဝင်သည်များပိုမိုပြည့်နှက်လာသည်နှင့်အမျှထိုအရေအတွက်တိုးလာသည်။ စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြည့်ဆည်းရမည်ကို ဦး စားပေးရမည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က ReadyTalk,awebinar software ကိုပလက်ဖောင်း, နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအားလုံးအကြောင်းဖြစ်ပျက်သောအရာကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် webinar စီးရီးဖြန့်ချိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် webinars ၃ ခု၏သင်တန်းများမှကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်သူ ၆၀၀ ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက် ၂၅ မှ ၃၀% သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, webinars 600 ခုနှစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
Webinar မြှင့်တင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ထပ်မံဖတ်ရှုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ webinar မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးချက်များအကြောင်း၊ ၁၀။ နောက်လာမည့် Webinar ကိုတိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဦး စားပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ ROI ကိုမည်သည့်အရာကပိုမိုပြောင်းလဲစေမည်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် webinars နှင့်စကားပြောဆိုမှုများကိုသေချာမြင်နေရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်း ROI ကိုတွက်ချက်ချင်ခဲ့သည်။ Webinar ROI အတွက်တွက်ချက်မှုဖြစ်သည့် ReadyTalk နှင့်ပူးပေါင်းပြီးဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါဖြစ်သည်။
သင်အရင်က webinars ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ သင်စပြီးလုပ်သည်ဖြစ်စေဒီ calculator ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ webinar အစီအစဉ်သည်သင်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ROI အတွက်အကြံပြုချက်များရယူပါ။
သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် webinars များဘယ်လိုသုံးနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
သင်၏ webinar ROI ကိုရှာပါ။
ReadyTalk's ROI Calculator ကိုသုံးပါ
ထုတ်ဖော်: အဆင်သင့်စကားပြော ငါတို့၏ client တစ်ခုနှင့်ကမကထပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် Martech Zone.
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေး WebinarReadyTalk ဂဏန်းတွက်စက်ro တွက်ချက်မှုroi ဂဏန်းတွက်စက်ဝဘ်ကွန်ဖရင့်ဝဘ်ကွန်ဖရင့်ပြုလုပ်ခြင်းဝဘ်ဆိုက်အစည်းအဝေးဝက်ဝံ